वैदेशिक रोजगारीबाट चैतमा फर्किएका २७ वर्षीय भागेश्वरले जब आफ्नै श्रीमती र बुबाको यस्तो कुरा थाहा पाएपछी …. – Classic Khabar
वैदेशिक रोजगारीबाट चैतमा फर्किएका २७ वर्षीय भागेश्वरले जब आफ्नै श्रीमती र बुबाको यस्तो कुरा थाहा पाएपछी ….
August 24, 2021 79
वाइसियलका एक युवकको तस्बिर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वि’वादित भएकी लुम्बिनीकी प्रदेश सांसद विमला वली खत्रीलाई अर्को स म स्या परेको छ । परिवारले उनलाई अदालतमा उजुरी दिएका छन् । बिमला वि’रुद्ध उनकै छोराहरुको नामवाट मुद्दा परेको हो । छोराहरुको तर्फवाट अं’श मु’द्दा दायर भएको बताइएको छ ।
फेसवुकमा केही दन अघि उनको एक वाइसियलका युवकसंग तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । य’द्धपी त्यो तस्बिर उनीहरुले एडिटेड भनेका छन् । विमलाका दुई छोराहरु १२ वर्षिय प्रणय वली र ९ वर्षिय दिवाकर वलीको तर्फबाट उनीहरुका साहिँलो बुबा अमरबहादुर वलीले जिल्ला अदालत दाङमा मु द्दा दर्ता गरेको पारिवारिक स्रोतले पनि जनाएको छ ।
दाङ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार धनसिंह गिरीले सो कुराको पुष्टि गरेका छन् । भदौ ३ गते अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदक अमरबहादुर विमलाका श्रीमान स्वर्गीय उत्तरकुमार वलीका साहिँला दाजु हुन् । अदालतमा दिएको निवेदनमा पनि बिमलाको पछिल्लो घटनालाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । बिमला आफ्नो परिवारसंग ४ महिना देखि सम्पर्कमा समेत नरहेको उनका जेठाजुको भनाई छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नं ३ ख बाट निर्वाचित उत्तरकुमार ओलीको दुर्घटनामा निधन भएपछि २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट विमला निर्वाचित भएकी थिइन् ।
Prevलुम्बिनीकी प्रदेश सांसद विमला वली खत्रीलाई अर्को समस्या
Nextछोराको १४ वर्षका साथीसँग आमाले शा रीरिक स म्बन्ध राखेपछि….